स्व. लीलाम्बर सापकोटाको स्मृतीमा १० लाख रुपैँयाको अक्षयकोष स्थापना – Gulmiews
स्व. लीलाम्बर सापकोटाको स्मृतीमा १० लाख रुपैँयाको अक्षयकोष स्थापना
April 20, 2016 Sanju Kauchha
No comments	बैकुण्ठ रायमाझी
चेक रिपब्लिक, १९ अप्रिल । गुल्मी वामी आगोपार्ने (माझ्खर्क ) घर भइ हाल चेक रिपब्लिकमा परिवार सँग बस्दै आउनु भएका लिलाम्बर सापकोटाको उपचारको क्रममा मृत्‍यु भएको छ । सापकोटाको ७४ वर्षको उमेरमा यही अप्रिल ५ मा निधन भएको हो ।
सपकोटाको निधन प्रती शोक प्रकट गर्न चेक रिपब्लिकमा उहांँका आफन्त शुभचिन्तकहरुको सहभागितामा शोक सभा आयोजना गरिएको थियो । जसमा एनआरएन चेक रिपब्लिकले मृतक सापकोटाको सम्मानमा मौन धारण गर्दै श्रद्दान्जली अर्पण गरेको थियो ।
समाजसेबी सापकोटाले गुल्मी वामीकै पहिलो बिद्यालय वामी मैदानको शारदा मा.बि.को पहिलो प्रधानाध्यापक भएर योगदान पुर्‍याउनुभएको थियो । साथै बिद्यालयमा सेवा पस्चात उँहाले बिरामीको सेवा गरेर आफ्नो बाकी जीवन बिताउनु भयो । पिताको देहावसान पछि पनि समाजलाई योगदान पुगोस भन्ने हेतुले उँहाका पुत्रहरू डाक्टर कृष्ण सापकोटाको पहलमा शारदा मा.बि. वामी मैदानमा १० लाख रुपैँया बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेर त्यसको ब्याजबाट गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ती दिने तैयारी रहेको सापकोटाको परिवारले जनाएको छ । Facebook	Twitter	Google+	Pinterest	Linkedin